UkuDityaniswa kwabahlali kweThala leencwadi loluntu lePrinceton, uMasipala wePrinceton kunye neZikolo zikaRhulumente zePrinceton. Ulwazi oluqinisekisiweyo. Imithombo ethembekileyo.
Uhlaziyo lwemihla ngemihla loSodolophu
Indlela eya ekuVuleni kwakhona
Imigaqo yangoku kunye neengcebiso
Ukuba uziva Ugula
Uluhlu lwento evulekileyo
Yintoni uThintelo oluVulekileyo
Inkxaso Yoshishino Lendawo
Ukusebenza kweziBonelelo zaseKhaya
Yenzelwe abantwana nje
Ungeniso lweMisitho eNgenisiweyo
Iinkonzo zokuPhononongwa kwe-Virtual
Ishishini kunye neNgqesho
Uqashiwe / Ungaphangeli
IZiko eliPhezulu lePrinceton
online amaqela enkxaso
Ikhuselekile Abadala-Inkqubo idibanisa abadala kunye ukutya akunxibelelani.
Engabonakaliyo Abahlobo basekhaya Inkqubo-Abasebenzi bePSRC bangena kwi-Princeton abadala xa betsala umnxeba okanye ikhamera yewebhu.
Iphulo likaMakhelwane leBuddy-Amavolontiya akulungele ukunceda abahlali abadala basePrinceton. Iinkcukacha ezithe xaxe Apha. Ukubhanqa ne-Buddy yaseKhaya ekuza kunceda ngayo, nceda ubhalise Apha.
Ingxoxo yeFireside ebonakalayo- Zondeza iintlanganiso zaphakathi evekini nge-2 pm Jika ungene ukuze uncokole nabahlobo abatsha ngecomputer, i-smartphone okanye umnxeba wefowuni. Bhalisa Apha.
Intsapho yamaJuda kunye neNkonzo yaBantwana ye-Greater Mercer County
Ifowuni "yokuyeka iiyure," M, W, F, 609-987-8100, ext 0; amaqela enkxaso ebonakalayo enza, 609-987-8100, ext. 117 okanye email; Ingcebiso umntu ngamnye, ukwamkela i-medicaid, amayeza, abantu abangakhuselekanga kunye uninzi lweinshurensi yabucala (iintlawulo zokubambisa zihlangulwe ngexesha lentlekele), 609-987-8100, ext 102. I-Drop-In Hours, Iqela lenkxaso kunye neeNkonzo zaBantu ezifumaneka eSpain nabacebisi abathetha iilwimi ezimbini.
Ogqirha abadla umhlala-phantsi / ogqirha abasuka kwamanye amazwe bayadingeka
I-Rhuluneli ikhuphe umthetho olawula ukuba abagqirha abathathe umhlala-phantsi okanye abasuka kwamanye amazwe babandakanyeke kumlo ochasene ne-COVID-19. Umyalelo ubanikezela ekungagungqini kuxanduva loluntu ngeenzame ezilungileyo zokubonelela ngononophelo lwe-COVID-19. Umntu ngamnye angabhalisa Apha. Ayigutyungelwanga phantsi komyalelo, kodwa ke kufuneka abafundi kunyaka wokugqibela wezifundo zobugqirha.
Ukuthunga iiprojekthi ezininzi zeMasks
Ibhunga lezobuGcisa lasePrinceton lixhasa inyathelo lamalungu oluntu lokuboleka isandla esonyusa ukubonelela ngendawo kwiimaski zelaphu. Unokuvolontiya ukusika ilaphu, kunye / okanye ukuthunga. Iimaski ezigqityiweyo ziya kubakho emva koko ukuba zikhethe abo bazifunayo. Iinkcukacha ezithe xaxe
princetoncovid.org, Iqhayiya inikwe amandla yi WordPress.